बुद्धि भरिंदा आध्यात्म यात्रा - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
रक्षाले भनिन्– ‘अंकल ध्यान र शास्त्रले डिभाइन इनर्जीसँग जोडाउँदैन । यिनले त केवल व्यक्तिलाई प्रभुको सत्तालाई अनुभूति गर्ने वातावरणसम्म तयार गरिदिन्छ । त्यसैले अब यो ध्यान र शास्त्रसँगै तपार्इंले प्रभुको सत्ताको अनुभव गर्ने । प्रभुबाट सन्देश पाउने अभ्यास पनि थाल्नु पर्छ । मैले उनलाई सोधें– ‘तिम्रो सो
मेरो यसपाली डालास टेक्सासको भ्रमण नितान्त आध्यात्मिक र पारिवारिक रह्यो । देवीजीले सदाझैं ‘तपाईं आउनुभाको बेलामा एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरौं’ भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । तर, मैले त्यसो नगरौं भनें । किनकि रक्षा अधिकारीले केलरबाट मेनुका र मलाई आउनु भनेर बोलाएकी थिइन् । रक्षाले भन्थिन्– ‘प्रभू अर्थात् दैवीशक्तिबाट तपाईंहरुलाई बोलाएर हिलिंग गर्नु भन्ने मेसेज छ । यस्तो मेसेज अहिलेसम्म मेरो आमाबाबा, भाइ र अन्य नजिकका नातेदारबाहेक कसैलाई आएको छैन । तपाईंहरु नै नजिकको पहिलो मान्छे पर्नुहुन्छ ।’
रक्षाकी आमा हरी भाउजू र मेनुका साथी हुन् । रक्षाका पिता खगेन्द्रजी मेरा कानून व्यवसायी मित्र हुनहुन्छ, जो हाल सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष हुन् । उहाँले नै मेरो विवाह मेनुकासँग गराइदिनुभएको हो– २०४१ साल वैशाखमा । भाउजू टेक्सासमै हुनुहुन्छ । खगेन्द्रजी भने नेपाल फर्किनु भो ।
जानुभन्दा अगाडि नै रक्षाले आफूमा प्रभूको कृपा हुने गरेको छ । प्रभूले मेनुका र अंकललाई बोलाऊ भन्ने मेसेज दिनुभएको छ भनेर रक्षाको आमाले पनि भन्नु भो । कुराकानीकै क्रममा के पनि बुझियो भने रक्षाको ध्यान । पूजा कोठामा परिवारका सदस्यहरु अहिलेसम्म पस्नुभएको रहेनछ । यसै बेला मेनुकाको करिब ९ दिनको छुट्टी भएको हुँदा छोरा डा. अभिषेक भएको ठाउँ ओरलेण्डो जाने भन्ने थियो । तर, छोराको अन्तै जानुपर्ने भएकाले गर्दा अर्को वैकल्पिक ठाउँ खोज्दै थिइन् । उनको छुट्टीमा मेरो अदालतमा रहेको मुद्दामा जानु परेको कारणले गर्दा केवल ५ दिन मात्र बिताउन सक्छु । तर, कहाँ जाने हो ठाउँ तिमी नै तय गर भनेको थिएँ । किनकि पछि छुट्टीको समय राम्ररी बितेन भने त्यसको दोष म लिन चाहन्नथें । उनको मन डालास जाने कि नजाने भन्नेमा दोधार थियो । मेरो मन भने डालास जानेमा भए पनि चुपचाप नै थिएँ । मलाई लागेको थियो पक्कै पनि प्रभुले मलाई रक्षामार्फत केही उपहार दिनेवाला हुनुहुन्छ । किनकि मलाई प्रभुले यसरी नै पथ–प्रर्दशक पठाइदिनुभएको छ, जब–जब ममा आध्यात्मिक यात्राको क्रममा जिज्ञासा उठ्दथे ।
रक्षाको फोन आइरह्यो । उनले मेनुकालाई भन्दै थिइन्– ‘आन्टी अंकललाई आउन मन छ तर तपाईंले नै दोमन गरिरहनुभएको छ ।’ तपाईंलाई धेरै स्ट्रेस छ । प्रभुले बोलाऊ भन्नुभएकाले नै मैले आउनु भनेकी हुँ ।’ मैले केही भनिन । किनकि म यो बिदाको सदुपयोग मेनुकाकै इच्छाअनुसार होस् भन्ने चाहन्थें । मैले एकदिन सोधें– ‘कहाँ जाने निर्णय ग¥यौ ? चाँडो भन । नत्र टिकट महँगो हुन्छ ।’ जवाफमा उनले डालास जाने भनिन् । अनि मैले खुसी हुँदै टिकट काटें– फरक फरक मितिको ।
मेनुका मभन्दा ३ दिन अगाडि नै डालास गइन् । त्यहाँ गएर उनले रक्षाबाट पाएको न्यानोपन, हिलिंग र रक्षाको दिनचर्याले उनलाई धेरै प्रभाव पारेको कुरा बताइन् । रक्षा आफ्नो श्रीमान् सबिन र छोरासँग बस्छिन् । भाउजु भने छोराबुहारीसँग बस्नुहुँदो रहेछ । मेनुका बाहिर घुम्नुपर्ने, फोटो खिच्नुपर्ने मान्छे घरमै बस्दा पनि आनन्दित भएको अनुभव सुनाउन थालिन् । भाउजूसँग गफिनु सट्टा रक्षासँगै उठबस हुने भइन् । अनि उनका कुरा सुनिरहुँ लाग्ने भनिन् । मलाई लाग्यो मेनुकाले बल्ल स्ट्रेस मेटाउने मान्छे भेटिन् ।
म मुद्दा सकेर १३ फेब्रुअरी २०१९ रातिको फ्लाइटबाट डालास गएँ । मेनुका रक्षाकै घरमा बसेकी थिइन् । म अबेर गरेर त्यहाँ पुगेको हुँदा भोलिपल्ट साँझ रक्षाले मलाई उनको हिलिंग रुममा लगिन् । आफ्नो आसनमा बसिन् । म उनको अगाडि बसें । मैले लगेका केही धार्मिक किताबहरु दिएँ । सानो कोठामा कुण्डलिनी चक्र अंकित पोष्टर भित्तामा टाँगिएको रहेछ । सेता, काला र अन्य रंगका चम्किला ढुंगाहरु, धूप, सुगन्धित तेल, सानो गीता, कुरान र अन्य किताब । भित्तामा उनका र सबिनका ग्राजुएट डिग्री र अन्य प्रमाणपत्र । रिंगिग बेल । हिमालय सल्टको बत्ती । डिस्पेन्सर । अनि सोल, माइण्ड र बडी लेखिएको बोर्ड आदि । उनले सोधिन्– ‘अंकल तपाईंको माइण्डमा डर छ ।’ मैले भनें– ‘अहँ छैन ।’ किनकि मैले विपश्यना लगायतका ध्यानहरु १९९४ देखि नै गर्न थालेको हुँ । त्यसपछि सनातनीय पद्दती, चक्रसाधना, साई मण्डली लगायतका अन्य धार्मिक सम्प्रदायसँग जोडिएको छु । धेरै गुरुहरुको आर्शिवाद पाएको छु । धार्मिक शास्त्र र लेखहरु अध्ययन गरेको छु । युट्युब र सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिएका आध्यात्मिक प्रवचन र साहित्य प्रायः छुटाएको छैन । म शरीर होइन । आत्मा हुँ । मृत्यु शरीरको हुन्छ, आत्माको हँुदैन । प्रत्येक घटनालाई समतामा रहेर वा साक्षीभावले हेर्नुपर्दछ भन्ने तथ्य म राम्ररी बझ्दछु । अर्थात् अनायासै मैले आफनो अन्तरमनमा रहेको अंकलको अहम्पन निकालें ।
मैले त्यसपछि रक्षालाई सोधें– ‘तिम्रो गुरु को हो नि ?’ जबाफमा भनिन्– ‘मेरो गुरु युनिभर्स अर्थात प्रभू हुनुहुन्छ । मलाई प्रभुले धेरै लामो समयदेखि घचघच्याइरहनु भएको रहेछ । तर मैले त्यसको अर्थ नबुझेको रहेछु । २०१८ को सुरुवातमा म एवेकन भएँ । इन्लाइटेण्ट भएको महसुस गरें । त्यो दैवीसत्ता वा युनिभर्सले नै मलाई के गर्ने वा नगर्ने भनेर मेसेज दिनुहुन्छ ।’ उनी यस्तै अरु धेरै प्रसंगहरु मलाई सुनाउँदै गइरहेकी थिइन् । मैले उनलाई भनें– ‘रक्षा तिमीले भनेका कुराहरु कृष्ण, बुद्ध, महाविर, रामकृष्ण, विवेकानन्द, पं. श्रीराम शर्मा, महर्षी रमण, साई, परमहंश योगानन्द, रजनिश, जे. मुर्ती, सद्गुरु, आदिले भनेका कुरासँग मिल्छन् । मैले पनि पढेको छु । तिमीले पनि त पढेकी हौली नि ?’ रक्षाले भनिन्– ‘अंकल मैले त तपार्इंले पढ्दै पढेकी छुइन । मैले कुरा गर्दाखेरी अरुले पनि यो त फलानाले भनेको छ वा यो फलानो किताबमा लेखिएको छ भन्छन् । तर अंकल कुरा के भने प्रभुको सत्ता सर्वत्र छ । अनि तपाईं त्यो सत्तासँग जोडिनु भयो भने तपाईं पनि त्यही बोल्नु वा अनुभव गर्नुहुन्छ । जुन अरुले गरे वा गर्दछन् । त्यसैले म प्रभुसँग जोडिएकी हुँदा मलाई कुनै गुरु वा शास्त्रको आवश्यकता पर्दैन ।’ उनले यसरी भन्न थालेपछि म रक्षासँग बग्न थालें । मानौं म पनि उनीसँग त्यो सत्तासँग जोडिएँ । उनले मलाई आफ्ना धेरै अन्तरंगहरु बाँडिन् । मैले पनि बाँडें । मेरा हर्षका आँसु बगे– उनका हर्षका । सायद रक्षालाई लाग्यो उनले आफूलाई गहिराइसम्म बुझ्ने एउटा साधक भेटिन् । हाम्रा लय र ताल मिलेका थिए । अब म रक्षासँग हिलिंग, ध्यान अनि त्यो डिभाइन इनर्जीसँग कसरी जोडिने भन्ने विषयमा जानकारी पाउन अझ बढी उत्सुक भएँ ।
रक्षाले भनिन्– ‘अंकल ध्यान र शास्त्रले डिभाइन इनर्जीसँग जोडाउँदैन । यिनले त केवल व्यक्तिलाई प्रभुको सत्तालाई अनुभूति गर्ने वातावरणसम्म तयार गरिदिन्छ । त्यसैले अब यो ध्यान र शास्त्रसँगै तपार्इंले प्रभुको सत्ताको अनुभव गर्ने । प्रभुबाट सन्देश पाउने अभ्यास पनि थाल्नु पर्छ । मैले उनलाई सोधें– ‘तिम्रो सोल, माइण्ड र बडीको कन्सेप्ट के हो ? तिमी के गर्छौ ?’ रक्षाले भनिन्– ‘अल्कालाइन खाना खाने, लाइट व्यायाम गर्ने अनि माइण्डमा रहेको डरलाई हटाउने । यो डर हटाई प्रभुको सत्तामा जोडिनका लागि गाइडेड मेडिटेशन गराउँछु । व्यक्तिका कमजोर भएका चक्रहरुलाई हिलिंग र इनरजाइज गर्छु । आवश्यकताअनुसार स्टोनहरुको प्रयोग पनि गर्ने गर्छु । मेरो मद्दतको आवश्यकता पर्ने र सम्पर्कमा आउनेलाई डिस्टेन्स हिलिंग पनि गर्ने गर्दछु । अमेरिकामा लाइटवर्करहरुको नेटवर्कमा पनि छु । यो टेक्सासको केलर डिष्ट्रिक्ट एजुकेशन बोर्डलाई मेरो यो सोल, माइण्ड र बडी प्रोग्राम स्कुलका बच्चाहरुबाट सुरु गर्न देऊ भनी प्रस्ताव राखेकी छु । छलफल पनि हुँदै छ । किनकि तयारी गर्ने भनेको केटाकेटी अवस्थादेखि नै हो । सायद मेरो यो प्रस्ताव स्वीकृत हुन्छ होला । अनि डलासमा २ मार्चमा हुन गइरहेको फस्ट वुमन आन्त्रप्रेनरसिप एण्ड लिडरसिप प्रोग्राममा सोल, माइण्ड, बडीको विषयमा पहिलो पटक नेपाली समुदायका बीच आफ्नो धारणा राख्दै छु ।’ मैले उनलाई भनें– ‘छोरी तिमीले राम्रो प्रस्तुती दिनेछौ किनकि ईश्वर तिम्रो साथमा हुनुहुन्छ ।’